DEG DEG: Qorshe xilka looga qaadayo Wasiir Isloow oo socda & Go’aanka Kheyre -News and information about Somalia
Home News DEG DEG: Qorshe xilka looga qaadayo Wasiir Isloow oo socda & Go’aanka...
DEG DEG: Qorshe xilka looga qaadayo Wasiir Isloow oo socda & Go’aanka Kheyre
Siyaasiyiinta & duubabka dhaqanka Beesha Mudulood ayaa wada qorshe ay ku doonayaan in xilka looga qaado Wasiirka amniga Xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Abuukar Isloow Ducaale.
Dadka horkacaya Qorshahan looga shaqeynayo sidii Wasiir Isloow xilka looga xayuubin lahaa ayaa ku sheegtay sababta ay arrintaan u horboodayaan iney tahay in wasiir Isloow uu hilmaamay dadkii uu metalaada uu Kursiga ugu fadhiyay,islamarkaana uu isku dhiibayo Xukuumadda Nabada iyo Nolol,islamarkaana ilaa iyo hadda wax wanaagsan oo la sheegi karo uusan ku soo kordhin xilka uu kudada haayo.
Waxayna sheegeen iney doonayaan in muda xilkeedka Dowladda Farmaajo ka dhiman iney la yimaadaan weji cusub oo wax badan oo la taaban karo ku soo kordhiya dalka iyo dadka Soomaaliya,waxayna balan qaadeen in shaqsiga ay ku bedelayaan uu noqon doono mid eex iyo daneysi ka hufan.
Inta badan Siyaasiyiinta iyo Waxgaradka Beesha Mudulood ayaa ku qanacsaneyn howsha Wasiirka amniga hayo,islamarkaana keliya u arkaan mas’uul Kursiga ku ilaashanayo Hantidiisa iyo sharaftiisa.
Wasiirka amniga Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Isloow ayaa lagu xantaa inuu aad ugu dhow yahay Mas’uuliyiinta ugu sareysa dalka,islamarkaana uu daacad u yahay,taasina keeneyso inuu sii xajisto Kursiga,maadama fashilaad badan oo qasab ka dhigi kartay in xilka laga qaado soo wajahday.
Sidoo kale, Wasiir Isloow ayaa ka mid ah dhowr Wasiir oo kalsooni buuxda ka heysto madaxweynaha iyo Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya,kuwaasi oo danahooda gaarka ah ku ilaashanaya.
Previous articleMadaxweyne Trump oo Israel ka dalbaday arrin halis ku ah Ilhaan Cumar
Next articleShir Madaxtooyada Kismaayo Ka socday oo lagu kala dareeray, Maxaa sababay…